Andriamanitra no Namana Tsara Indrindra
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Afrikaans Albaney Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Blackfoot Boulou Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frafra Frantsay Futuna (Atsinanana) Féroïen Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kariba Kinyarwanda Kirghiz Kissi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwanyama Laosianina Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Malagasy Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Mbunda Medumba Mizo Nahuatl (Guerrero) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nengone Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Sarnami Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Shuar Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Norvezianina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tigrigna Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Urhobo Venda Wallis Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa Éwé
Tsy misy tsara noho ny hoe naman’Andriamanitra. Hampianatra anao izy, ka ho sambatra sy hilamin-tsaina ianao, sady tsy hino zavatra diso na hanao ratsy intsony. Hihaino ny vavaka ataonao izy, ka hiadan-tsaina sy tsy hatahotahotra ianao. (Salamo 71:5; 73:28) Hanampy anao izy rehefa misy zava-manahirana. (Salamo 18:18) Homeny fiainana mandrakizay koa ianao.—Romanina 6:23.
Ho lasa namanao ireo naman’Andriamanitra. Ho toy ny fianakavianao mihitsy izy ireo. Ho faly izy ireo hampianatra anao momba an’Andriamanitra, ary hanampy sy hampahery anao.
Tsy mitovy amin’Andriamanitra isika. Raha te ho naman’Andriamanitra ianao, dia tadidio fa tsy mitovy amin’ny minamana amin’olona izany. Ela niainana noho isika izy, ary hendry sy mahery lavitra noho isika. Afaka mibaiko antsika izy, satria izy no Mpanjakantsika. Tsy maintsy manaiky ny teniny sy manao izay asainy atao àry isika, raha te ho namany. Mahasoa antsika foana izany.—Isaia 48:18.